Vondronasan’ny tambajotra sosialy any Laos: Hikendry ireo ‘vaovao faikany’ ve izy ireo sa hanisy sivana ny fitsikerana an-tserasera? · Global Voices teny Malagasy
Takiana hisoratra anarana ny mpisera aterineto sy ny tambajotra sosialy
Voadika ny 11 Jona 2021 4:39 GMT
Mpampiasa solosaina ao Laos. Sary Flickr avy amin'i jonrawlinson. (CC BY 2.0)
Nanamafy ny fanaraha-maso ny aterneto ny governemanta ao Laos. Tamin'ny volana Oktobra 2020, nanome baiko ireo mpandraharahan'ny sehatry ny tambajotra sosialy izy ireo hisoratra anarana any amin'ny Departemantan'ny Haino Vaky Jery ao amin'ny Ministeran'ny Fampahalalam-baovao, Kolontsaina ary Fizahan-tany. Tafiditra tao anatin'ilay torolàlana na dia ireo olon-tsotra mpisera aterineto aza:
Ho valin'izany, nanangana ny Fiaraha-mientam-paritra ASEAN ireo vondrona fiarahamonim-pirenena monina any Azia Atsimo Atsinanana, ary nanao fanentanana tamin'ny fampiasana ny tenirohy #StopDigitalDictatorship (Atsaharo ny didy jadona nomerika). Niara-nanao sonia fanambarana iraisana ihany koa izy ireo izay manakiana ny torolàlana mifehy ny aterineto Laosianina:
Notanisain'izy ireo ny raharaha momba ilay mpikatroka tontolo iainana Houayheuang Xayabouly, fantatra ihany koa amin'ny anarana hoe Muay, izay notanana am-ponja hatramin'ny taona 2019 noho ny fandefasana horonantsary tao amin'ny Facebook, izay nanakianany ny fihetsiky ny governemanta Laos manoloana ny lozan'ny tondra-drano. Ankoatra an'i Muay, misy ihany koa ireo mpisera Facebook marobe izay voampanga noho ny fanehoan-kevitra momba ny kolikoly na ny fanararaotam-pahefana nataon'ny manampahefana tao an-toerana.
Lany ireo toromarika vaovao taorian'ny nanombohan'ireo mpisera Twitter ao Laos nampiasa ny tenirohy # ຖ້າ ການ ເມ ອືງ ລາວ ດີ (Raha tsara ny politikan'i Laos) mba hanehoana hevitra momba ny olana ara-politika. Tamin'izany fotoana izany, naneho firaisankina tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana manohana ny demaokrasia Thailandey ihany koa ny olom-pirenena Laô. Nanoratra i Sebastian Strangio, tonian-dahatsoratry ny tranokalam-baovao ao amin'ny The Diplomat any Azia Atsimo atsinanana fa mety ho kendrena hanafoana ny firongatry ny hetsika mpanohitra an-tserasera ny vondronasa:
Tamin'ny taona 2020, manana mpiseran'ny tambajotra sosialy mavitrika miisa 3,10 tapitrisa i Laos , na 43 isanjaton'ny isan'ny mponina.